Ziziphi iintlobo zezemidlalo ezicetyiswayo kubantwana?
Iziphakamiso ekuthandweni kokuqala kwemidlalo yemidlalo abazali banokuzifumana. Imizekelo yemidlalo enkulu ikhuthazayo. Kodwa uluvo lwabagqirha kaninzi aluqwalaselwanga, oluchaphazelekayo nemiphumo emibi kwimpilo yabantwana. Yingakho ndicebisa kuqala ukuba ndiqhelane neengcebiso zabantwana besifo sezingane, eziza kunikwa ngezantsi, kwaye zize zenze isigqibo sokuthi umjikelezo uza kuthatha umntwana wakho.
Umkhondo kunye nebala lezemidlalo
Amantombazana angakwazi ukufunda iimbaleki ukususela kwiminyaka elishumi. Olu hlobo lwezemidlalo luba nemisipha yesifuba, ukuphefumula kakuhle kwaye kuphuculwe ukunikezelwa kwe-oksijini. Umntwana uya kuba nezimo eziguquguqukayo kwaye azixakeke, onke amaqela omzimba ahlalisane.
Amantombazana asebenza kwiimidlalo, abe ngabanikazi benani elihle kunye nemilenze ende.
Amakhwenkwe abuye ahlasele iimbaleko zinceda kakhulu, kodwa kufuneka ufuneke ukuba ungabandakanyi yonke into eyenziwa kumashishini osebenzayo.
Kucetyiswa ukuba abantwana badide kwiminyaka emihlanu ukuya ezintandathu. Ukubhukuda ngokuvisisana kuvelisa onke amaqela emisipha. Umntwana ufunda ukuphefumula ngokufanelekileyo. Ukubhukuda kunika ithuba elihle. I-brow kwi-back is generally tool tool for the prevention and treatment of scoliosis (i-crawl kwimeko ayifanelekanga).
Amakhwenkwe aguqayo aneemigxa ebanzi kunye ne-pelvis encinci. Amantombazana akwenza amabele amnandi.
Kwabantwana abaneminyaka engama-6, abantwana besincoma ukunqumla, kuba ayinakuyithintela intliziyo.
Izakhono zicetyiswa ukuba amantombazana kunye namantombazana aphakathi kweminyaka emithandathu. Ukukhwela i-Skating kukukhuthaza ukuphuhliswa kwezixhobo zendawo, kuqinisa imisipha yemilenze, kukhulisa ukuxhamla komntwana kwaye kwenza kube lula ngakumbi.
I-Skiing ingaqhutyelwa kwiminyaka emihlanu ukuya kwimithandathu. Iminyaka engcono kakhulu yokuqala izifundo zilishumi elinesibhozo. Lo mdlalo uquka onke amaqela omzimba. Ukongezelela, abantwana abanenkathazo nje kuphela, kodwa banokuqiniseka ngakumbi ngamakhono abo.
Umsebenzi onzima ngebhayisikili ayikhuthazwa de kube yiminyaka esibhozo. Kwaye nangona yonke imisipha yomlenze ifumana umthwalo omhle kulo mdlalo, umntu kufuneka akhumbule ukuba ukusetyenziswa kakubi kweengalo zomlenze womlenze kwenza kube nzima kakhulu, okubangela ukuba izihlunu zamanye amalungu omzimba zihlupheke.
I-cycling ayilunconywa malunga nokuphambuka kwintlupheko.
Ibhola linconywa kubafana abancinane abaneminyaka elilishumi elinesibini. Ibhola inomdla kakhulu, nangona kunjalo, njengebhayisikili, iqala kuphela izitho ezingaphantsi zomntwana. I-Hips iba enkulu kakhulu.
Imidlalo yebhola (basketball, volleyball)
Ezi zihlobo zemidlalo zilungele ukujongana neminyaka elishumi ukuya kwishumi elinesihlanu. Ukuphucula imidlalo yebhola, ukukhawuleza kokuphendula. Zenza umsebenzi weemivenge zegazi, iintliziyo kwaye zichaphazele kakuhle ukukhula komzimba. Isibalo somntwana siphucula, siyaqina.
Amakhwenkwe amancinci angangena kwi-gymnastics kungekudala ukususela kwiminyaka yesibhozo. I-Sportnagymnastika ibonisa ukuqhutyelwa komzimba phantsi kunye nakwiigobolondo (ihashe, amasongo, i-log, imivalo, i-trampoline). Ukuphuhlisa ukuguquguquka nokuqina komntwana. Udevochek udala ubabalo. Amakhwenkwe ayiluncedo kuzo zonke iintlobo zokuzilolonga ngaphandle kwegunya, ezinokuqaliswa kuphela emva kokuphela kokuvuthwa kwezesondo.
U-Aikido ungenye yeendidi ezihambelana nezobugcisa zase-oriental. Kungenziwa ezisibhozo okanye iminyaka ezisibhozo, kodwa uqeqesho olunzulu luqala kuphela kwiminyaka elishumi elinesihlanu okanye elishumi elinesibhozo. Abantwana ababandakanyekayo kwi-aikido, banyuse umkhuhlane, ngoko ke bancitshiswa kakhulu. Iiklasi ziqhutywe zibophe, zingabangela ukuqina kokwemvelo kwabantwana. Amaphupha aseMasirabilisiobiologically actively located on the soles of the feet. Ukuqwalasela kakhulu ukuqeqeshwa kunikwa ukulungisa ukuwa, ukwenzela ukuba abantwana baphephe ukulimala kwimihla ngemihla xa bedlala beqhuba.
Usebenze karatemozhno ukususela kwiminyaka esixhenxe. Ukuqala uqeqesho kwithuba lobudala akukho nto ingqiqo, kuba umntwana ufuna izinga eliphezulu lokuqwashisa. Ubuchule abuyi kufezwa ngaphandle kokugxinwa, ukunyamezela nokuzimela.
Kwi-karatemnyh ukunyakaza okubukhali, kuhamba kwaye kuphendukele, okuphikisanayo kunye nokwezinye izifo zomgudu.
I-Judo isinconywa ngokukodwa kubafana abaneminyaka elixhenxe. Lo mdlalo ugqwesileyo uvelisa imizimba ye-vsemyshtsy, kunye nokuphefumla kakuhle, ukuqeqeshwa, ukukwazi ukuqonda i-Iver ngamandla abo. I-Judo inqatshelwe kwizifo zomgudu. Ukongezelela, ngexesha loqeqesho, kubonakala ukuba kubonakala imivimbo emininzi ngenxa yokuwa, ngoko i-judo ayifanelanga abantwana abanesikhumba esibuhlungu.
Ngomntwana, kungcono ukhethe uhlobo lwemidlalo olukwazi ukuhlangabezana nazo zonke iimfuno zophuhliso olupheleleyo lomzimba omncinci.
Ukuba kwakungekho nzakalo
Ukunika umntwana umdlalo omkhulu, abazali bafanele bakhumbule ukuba le yindawo yokunyuka kwengozi. Ukulimala okungafaniyo kunokutshutshisa nakwiimbaleki ezinamava. Ukususela ekuqaleni kuyimfuneko ukuhlawula ingqalelo ekukhuseleni kwabo.
Ngaphambi kokuqala kwezemidlalo, kufuneka ufumane uviwo lwezonyango.
Ukuqeqeshwa, umnqweno omnye akwanele, ubuchule obuyimfuneko, idatha yenyama.
Ukufudumala, welula izihlunu, udibanise kwaye usebenze kakuhle ukusuka ekuphumleni ukuya kutshatyalalwano olukhulu, ngaloo ndlela unciphisa ingozi yokulimala.
Ubunzima bezintlu, iintlungu kunye neentlungu zomzimba zihlala zihlala zibangelwa ukufudumala okufutshane kunye nokulula, kwaye ngenxa yoko, ukungahambisani nokuhlanjululwa kwemizimba kunye namalungu, ngoko ke indlela efanelekileyo yokukhusela le ngxaki kukufudumala kakuhle.
Kulo mdlalo ngamnye, udinga izihlangu zakho, uncede ukuphepha umonakalo.
Xa kwenzeka ukulimala kwingingqi echaphazelekayo, iqhwa kufuneka lifakwe kwaye umntwana makangavunyelwa ukuba ahambe ade agqirha ugqirha.
I-Skiers kufuneka ikhuselwe kuma-ray creams kunye ne "filters" yezinga eliphezulu lokukhusela kunye nezilwanyana ezizodwa.
Abashukumi bahlala behlulwa ngamagxa namadolo; Ukongezelela, amanzi echibini kubangela ukuvuvukala nokucaphukisa amehlo kunye neendlebe. Izinyathelo zokuqapha: intanyeni - "iipugi zendlebe", ngenxa yamehlo - iiglasi ezikhethekileyo.
Xa udlala imidlalo, umzimba ulahlekelwa ngamanzi kunye neemaminerali, ngoko kufuneka uphuze amanzi rhoqo, kunye nezixazululo ezingcono ze-isotonic kunye ne-glucose kunye ne-electrolytes.
Ifomu efanelekileyo yomzimba iyimfuneko yokwenza nayiphi na ingxabano.
Kweminye imidlalo, ubugcisa obungqina bukuvumela ukuba uzigcinele kwingozi.
Yoga kunye nempilo yabantu banamhlanje
Iyiphi indlela engcono kakhulu yokuqeqesha ukuze ulahlekelwe isisindo ngokukhawuleza?
Ukusetyenziswa kwekhadiyamom yokulahleka kwesisindo
Umncedi omncinci oluhlaza elukulweni nobunzima obukhulu
Iimaski zamehlo okhathele
Ndiyakuvuyela iMaslenitsa 2016. Imidlalo, imibongo, iingoma kwiShrovetide
UTatyana Navka wabuyela emsebenzini esikhundleni se-honeymoon
Isosi yaseRoyal ne-cauliflower
Indlela yokulungisa isaladi yeKesari ekhaya
Uthando lweHoroscope ngo-2015 ngeCapricorn
Yintoni ubisi olungcono kubantwana?
Indlela yokukhetha itafile echanekileyo yokutshintsha umntwana wakho
Ndingayifumana njani isondo somntwana ngokuhlaziya igazi labazali?